Smart TV သို့ Mirror Mac မျက်နှာပြင် | ငါက Mac ကပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, လဲ tutorial
အလိုရှိ Smart TV သို့ Mac မြင်ကွင်းကိုထင်ဟပ်စေသည်? ယခုအချိန်အထိ OS X operating system ကို Apple Device များတွင် AirPlay နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ Samsung Smart TV နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်း Apple TV ရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဤ application အသစ်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည် Mac OS X ဖန်သားပြင်ကိုမှန် ရိုးရှင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုသဟဇာတဖြစ်သော Samsung Smart TV မှတစ်ဆင့်စနစ်ကိုကြည့်ရှုပါ တူညီသောကွန်ယက်နှစ်ခု devices များ။
AirPlay အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ထုတ်ကုန်များအကြားဂီတ၊ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်များအားကြိုးမဲ့စနစ်တကျစီမံနိုင်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ တေးဂီတကို Airport Express သို့ကူးယူခြင်းနှင့် Apple TV မှတစ်ဆင့်မှန်ဖန်သားပြင်များကိုအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။
1 သင်၏ Smart TV တွင် AirPlay မှအကောင်းဆုံးကိုရယူပါ
2 Apple TV + AirPlay ကိုအသုံးပြုခြင်း
3 AirParrot ၂
4 Google Chromecast ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင်၏ Smart TV တွင် AirPlay မှအကောင်းဆုံးကိုရယူပါ
တီထွင်သူ AirBeamTV BV သည် Apple TV မပါဘဲထင်ဟပ်ပြသမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် App Store တွင်ရရှိနိုင်သည့် Samsung TV အတွက် Mirror ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှနောက်ကျသော Samsung Smart TV နှင့် Mac OS X 2012 ရှိလျှင်၊ သင်သည် Mirror ကိုအများဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သငျသညျရိုးရိုးနှစ်ခု device ကိုချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်သငျသညျတူညီသော wifi ကွန်ယက်နှင့် sisခေါင်းစဉ်သည် Smart TV ကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေလိမ့်မည်။ ပြီးတာနဲ့၌တည်ရှိသည် ချိတ်ဆက် devices များစာရင်းသင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်၎င်းကိုရွေးပြီး Mirror လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။ developer များကတစ် ဦး ရှိစေခြင်းငှါသတိပြုမိသည် အထိ3စက္ကန့်များ၏နှောင့်နှေး အကယ်၍ ပိုရှည်သောအချိန်ဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည်ပုံ၏ချုံ့ထားသောအချိုးကိုပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။
Samsung TV အတွက်ကြေးမုံသည်လည်းရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည် မော်နီတာ display ကို သင်၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ထား အသံအရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်ပါ အသံကိုကွန်ပျူတာမှဖြစ်စေ၊ Smart TV ၏စပီကာများမှဖြစ်စေပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။
AirBeamTV BV သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် အခမဲ့ download ကျနော်တို့သုံးနိုင်သည်ကိုချက်ချင်းရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်း ၂ မိနစ်လောက် ၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏သက်သာခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုစစ်ဆေးရန်လုံလောက်သောအချိန်။ ဗားရှင်းအပြည့်ပါ € 9,99 အဘို့အ App Store မှာပေါ်မှာ ဒါပေမယ့်ဒါဟာများအတွက်အလွန်အမင်းအကြံပြု option ကိုဖြစ်ပါတယ် Smart TV သို့ Mac မြင်ကွင်းကိုထင်ဟပ်စေသည် Samsung မှ
Apple TV + AirPlay ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင်၏ Smart TV သည် Apple ၏ AirPlay နည်းပညာနှင့်တိုက်ရိုက်မကိုက်ညီပါက၊ သို့မဟုတ်သင့်တွင်သမားရိုးကျမဟုတ်သော“ smart” ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုရှိသည်။ သင်၏တီဗီတွင်သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုမိတ္တူပွားရန်ခွင့်ပြုသည့်အခြားပုံသေနည်းတစ်ခုရှိသည်။ Apple TV ကိုသုံးပါ.
သင်အသုံးပြုနိုင်သည် မည်သည့် Apple TV ကိုမဆို ဒုတိယ၊ တတိယ (သို့) စတုတ္ထမျိုးဆက်ကိုပထမစျေးကွက်နှစ်ခုကိုတပတ်ရစ်ဈေးကွက်တွင်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ Apple TV ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတာနဲ့သင်ရုံရှိသည် ၎င်းကို HDMI ကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ မင်းရဲ့တီဗီ ၎င်းကို WiF ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းအောက်တွင်သေချာစွာထားပါသင်၏ Mac ချိတ်ဆက်ထားသည့်
သင်၏ Mac ၏ menu bar တွင်ရှိသော AirPlay သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏ Apple TV ကိုရွေးပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလို၊ သင်၏ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်သည်သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ကြီးမားသောပုံပေါ်လာလိမ့်မည်။
YouTube, A3Player, Mitele, Netflix သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများမှဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်နေပါက AirPlay သင်္ကေတသည်ပြန်ဖွင့်သည့် ၀ င်းဒိုးတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကို နှိပ်၍ သင်၏ Apple TV ကိုရွေးချယ်ပါ ဗွီဒီယိုကိုသင်၏တီဗီသို့ထုတ်လွှင့်လိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်းသင်သည်ပုံမှန်အတိုင်းသင့် Mac ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ "Samsung TV အတွက် Mirror" အကြောင်း၊ AirPlay ကို Apple TV နဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့ရွေးစရာတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဥပမာ၊ AirParrot ၂.
AirParrot သည်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် AirPlay နည်းပညာကိုမပံ့ပိုးသောအဟောင်း Mac ကွန်ပျူတာပိုင်ဆိုင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းနှင့်သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ရှိသင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုပုံတူပွား။ ၊ သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုကြီးမားသောမြင်ကွင်းတွင်ကြည့်ရှုရန်ဗွီဒီယိုတစ်ခုပို့နိုင်သည်။
AirParrot2ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက၊ ၎င်းကို Apple TV နှင့် Chromecast စက်သို့မဟုတ် AirPlay နှင့်လိုက်ဖက်သောစပီကာများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည် သင်၏တေးဂီတကိုပို့ရန် ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်းသည် 1080p အရည်အသွေးအထိထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး၎င်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလက်ခံသူများထံဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပြီးတော့ဒါကသင်လိုအပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းဆိုတာသေချာမသိဘူးဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အခမဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေး version ကို download လုပ်ပါ ဒီမှာ, ထို့နောက်သင် app ကိုဝယ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်။
Google Chromecast ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင်၏ Mac ၏ desktop ကိုတိုးချဲ့နိုင်ခြင်း (သို့) သင်၏ Mac ၏မျက်နှာပြင်ကိုသင်၏ရုပ်မြင်သံကြား (သို့) ပြင်ပမော်နီတာတစ်ခုသို့မိတ္တူပွားနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် Air Parrot အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူ Google Chromecast ကိရိယာမှတဆင့် ကျွန်တော်အသေးစိတ်မြင်ပြီ
သင့်တွင် AirPlay နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကင်းမဲ့သည့် Mac အဟောင်းရှိပါက၊ ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာ Apple TV + Air Parrot2ထက်စျေးသက်သာသောနှုန်းထားဖြစ်သည် ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သိသည်မှာ၊ အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုထက်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်မည်သည့်အရာမျှပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိချေ။
ဒါ့အပြင် Google Chromecast စက်ကိုဝယ်ယူပြီး၎င်းကိုသင်၏ TV နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာအောက်ရှိ Wi-Fi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုသည်။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်သင် Air Parrot2မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏ Mac ၏ menu bar ရှိအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်၊ သင်၏ Chromecast စက်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုချဲ့နိုင်၊ ထပ်ပွားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ application တစ်ခုပို့နိုင်သည်။ အသံပဲ။
ငါတို့နှင့်အတူအဆုံးသတ် ဝန်ဆောင်မှု, သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လျှောက်လွှာ တူညီသောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခြားကိရိယာများနှင့်အကြောင်းအရာကိုမျှဝေပါ အကယ်၍ သင့်မှာ Mac၊ ရုပ်ရှင်၊ စီးရီး၊ ဓာတ်ပုံ၊ တေးဂီတနှင့်အခြားအရာများရှိရင်ကေဘယ်ကြိုးများမလိုဘဲသင်၏ Smart TV တွင်ပြနိုင်သည်။ ကြီးမားသောခြားနားချက်မှာသင်၏အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ TV ပေါ်တွင်သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုပုံတူပွား။ မရပါ၊ အကြောင်းအရာများကိုပို့ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက Apple မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်။ TV, Chromecast သို့မဟုတ် AirPlay၊ သင်လုပ်နိုင်သောဤအက်ပလီကေးရှင်းသာ ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ download လုပ်ပါ ၎င်းကို ၁၅ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
တစ်နေ့အက်ပဲလ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တီဗီကိုဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့က Mac ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ် third-party apps တွေအပေါ်မူတည်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါပုံတူပွားယူနိုင်တယ်၊ ရိုးရိုးလေးကလစ်ပဲ။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုဖွင့်တဲ့နေ့မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး စျေးပေါတယ်လီဗေးရှင်း ပြီးတော့အဲဒီအတွက်ငွေအမြောက်အများကိုထုတ်ယူရလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » Smart TV သို့ Mirror Mac မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက LG ကမှတ်စုယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေမယ်ဆိုရင်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ့ Sansumg အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်တစ်ခုခု !!!! ၎င်းသည်အလွန်ထိုက်တန်သည်။ အလွန်ကောင်းစွာသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုပုံစံကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းသည်ဇိမ်ခံကြောင်းပြောပြပြီးဖြစ်သည်။ တီဗွီတွင်အသံကြားလျှင်သင် plugin၊ AirBeamTV တပ်ဆင်ရလိမ့်မည်။ ပြproblemsနာမရှိဘဲတီဗီကိုနားထောင်နိူင်သည်။ Fantastic !!!
တီထွင်သူမှမှတ်ချက်ပေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာနှင့်တီဗီကြားတွင်နှောင့်နှေးနေကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပူစရာမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်အိပ်ယာ ၀ ယ်ရန်အိပ်ချိန်နီးပါးအချိန်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ငါအခုဝယ်မယ်။ SOYDEMAC အကြောင်းကြားစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PS: ကျွန်ုပ်၏တီဗီမှာ Sansumg UE46D6100 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာမှတ်မိလျှင်၊ ၂၀၁၂ မတိုင်မီဖြစ်သည်။
@juancagr စမ်းသပ်မှုပုံစံကိုသင်ဘယ်မှာရခဲ့သနည်း ကျွန်တော်စမ်းချင်ပါတယ်
Marcelo campusano ဟုသူကပြောသည်
အရိုးရှင်းဆုံး: Vuze (DLNA ဆာဗာ) ကိုသုံးပါ
Marcelo Campusano ကိုပြန်ပြောပါ
fer Rivera ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ mac မတိုင်မီ thunderbolt ကနေ hdmi မှတဆင့်ချိတ်ဆက်။ အခုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ... ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီငွေပေးချေမှုအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
fer rivera သို့ပြန်သွားရန်
vlvaro MarínOrdóñez ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ ၁၂ လက်မ MacBook တွင် HDMI port တစ်ခုသင်လိုအပ်ပါကနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါသည်